Ungqongqoshe u-Bartlett: I-Jamaica ibhekene nentuthuko enkulu kakhulu yokuthuthukiswa kwamahhotela kunoma yimuphi unyaka owodwa
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » Jamaica » Ungqongqoshe u-Bartlett: I-Jamaica ibhekene nentuthuko enkulu kakhulu yokuthuthukiswa kwamahhotela kunoma yimuphi unyaka owodwa
Kulandela umhlangano nabanikazi bamahhotela eSpanishi nezindawo zokungcebeleka ezitholakala e-Jamaica, eMadrid, eSpain, uNgqongqoshe Wezokuvakasha u-Edmund Bartlett (2nd l, ngaphambili), Umeluleki Omkhulu & I-Strategist Delano Seiveright (l), kanye no-Chevannes Barragan De Luyz (owesibili ukusuka kwesobunxele). , umugqa wesibili), Isikhulu Sokuthuthukiswa Kwebhizinisi, I-Jamaica Tourist Board (JTB), Continental Europe yabelana ngomzuzwana wesithombe nabanikazi bamahhotela. I-Bahia Principe, i-Iberostar, i-H10, i-Melia, i-RIU, i-Secrets, i-Blue Diamond Resorts, i-Grand Palladium, ne-Excellence ziphakathi kwabaqhubi bezokuvakasha abamelwe, nengqikithi yamakamelo amahhotela angu-8,000 e-Jamaica. Izinkampani ezimbalwa zisho izinhlelo zokwandisa izindawo zazo zokungcebeleka e-Jamaica, okuzoholela ekwandeni kwemali engenayo, ukuqashwa, nokuxhumana kwezomnotho kuso sonke isiqhingi.
Ungqongqoshe u-Bartlett wachaza ukuthi kuzotshalwa isamba sezigidigidi ezimbili zamaRandi ukuze kulethwe amagumbi ayizi-2, okuzoholela okungenani emisebenzini yetoho eyizi-8,000 kanye nemisebenzi yesikhathi esigcwele kanye nemisebenzi okungenani eyizi-24,000 yabasebenzi bokwakha.
UNgqongqoshe Wezokuvakasha, uMhlonishwa. U-Edmund Bartlett iveze ukuthi i-Jamaica ibhekene nentuthuko enkulu kakhulu yamahhotela nezindawo zokungcebeleka kunoma yimuphi unyaka owodwa, inamakamelo amahhotela engeziwe angu-8,000 ezigabeni ezihlukahlukene zentuthuko nokuhlela, iningi liholwa abatshalizimali baseYurophu.
UNgqongqoshe uBartlett wachaza ukuthi kuzotshalwa isamba sezigidigidi ezimbili zamaRandi ukuze kulethwe amagumbi ayizi-2, okuzoholela okungenani emisebenzini yetoho engu-8,000 kanye nesikhathi esigcwele kanye nemisebenzi okungenani engu-24,000 yabasebenzi bokwakha.
Uma kubhekwa ubukhulu bokutshalwa kwezimali, Bartlett izwakalise isidingo sokusebenzisana okungenazihibe, okuholwa futhi kwaqiniswa nguNdunankulu, uMhlonishwa Ophakeme. Andrew Holness, kanye nokusebenzisana kongqongqoshe abaningi. UNdunankulu u-Holness kanye noNgqongqoshe u-Bartlett bahlelelwe ukubamba iqhaza emikhosini embalwa ebaluleke kakhulu emasontweni nasezinyangeni ezizayo.
“Sijabule ngentuthuko embonini yezokuvakasha yakuleli, okungangabazeki ukuthi izoba nomthelela omuhle emnothweni futhi ihlomulise izinkulungwane zabantu baseJamaica. Ngempela, ezokuvakasha ziyimboni yokuhlinzeka ngempahla ehlanganisa imikhakha yezomnotho eminingi, okuhlanganisa ezokwakha, ezolimo, ezokukhiqiza, zamabhange nezokuthutha,” kusho uBartlett.
Okungenani abasebenzi bezokwakha abangu-12,000, osonkontileka bezakhiwo abaningi, onjiniyela, abaphathi bephrojekthi, kanye nochwepheshe abahlukahlukene bazodingeka ukuze kuqinisekiswe ukuphothulwa ngesikhathi kwala maphrojekthi. Ukwengeza, izinkulungwane zabasebenzi bezokuvakasha kumele baqeqeshwe ezindaweni ezifana nabaphathi, ezokupheka, ezokugcinwa kwezindlu, abaqondisi bezivakashi kanye nokwamukela izivakashi, ”engeza.
Izakhiwo ezisakhiwayo njengamanje zihlanganisa i-Princess Resort e-Hanover enamagumbi angu-2,000, ezoba indawo yokungcebeleka enkulu kunazo zonke e-Jamaica, kanye namanye amagumbi acishe abe ngu-2,000 ekuthuthukisweni kwe-Hard Rock Resort enezici eziningi, okufanele okungenani abe nezinye izinhlobo ezintathu zamahhotela. Ukwengeza, amagumbi angaphansi nje kuka-1,000 akhiwa amaSandal and Beaches e-St.
Izinhlelo ziyaqhubeka futhi zokuthi iViva Wyndham Resort enyakatho yeNegril ibe namagumbi ayi-1,000 esewonke, iRIU Hotel entsha eTrelawny enamagumbi acishe abe ngu-700, kanye neSecrets Resort entsha endaweni yase-Richmond e-St. Ann enamakamelo acela ku-700. I-Bahia Principe iphinde yamemezela izinhlelo ezinkulu zokunwetshwa, ngabanikazi bayo, uGrupo Piñero, ophuma eSpain.
Bartlett esanda kubuya I-FITUR, umbukiso waminyaka yonke obaluleke kunayo yonke emhlabeni wokuhweba ngezokuvakasha nokuvakasha kwamazwe ngamazwe, eMadrid, eSpain. Ngenkathi elapho, wabamba iqhaza ochungechungeni lwemihlangano yezinga eliphezulu nabatshalizimali ngokuyinhloko baseSpain, abaningi babo abangabanikazi bezindawo zokungcebeleka e-Jamaica.
U-Bartlett, owayephelezelwa uDelano Seiveright, Umeluleki Omkhulu kanye Nosomaqhinga, uveze ukuthi: “Ukuze uqedele ngempumelelo amaphrojekthi amakhulu okutshalwa kwezimali ngesikhathi esirekhodiwe, kudingeka indlela ehlangene kahulumeni nemboni ezimele.”
“Ukucatshangelwa kwemvelo nokusebenzisana nababambiqhaza basendaweni nakho kugqamile entuthukweni. UNgqongqoshe uBartlett ujube i-Tourism Enhancement Fund iJamaica Centre of Tourism Innovation ukuthi ithathe izinyathelo zamasu zokuqinisekisa ukuthi izinhlelo zamanje zokuqeqesha abasebenzi ezisebenzayo kanye nezitifiketi ziyandiswa ngokubambisana nabanikazi bamahhotela abazibophezele ukusebenzisana eduze nohulumeni kulolu daba,” kwengeza uSeiveright.
Bahia U-Edmund Bartlett Ihhotela Innovation Jamaica Indawo yokulala Ezokuvakasha
Isivakashi saseDashi siboshwe ngemuva kokwenza isibingelelo samaNazi e-Auschwitz
UDkt. R. Kenneth Romer uqoke iPhini Lomqondisi Jikelele we-Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation
U-Ivan Eskildsen: Ungqongqoshe Omusha WaseRiphabhlikhi yasePanama...
UFinnair: I-Furlough idinga ukuvela ngokuvalwa kwe...
I-Fraport Growth Trend iyaqhubeka naphezu kokusabalala kwe...
Abantu abangu-10 badutshulwe kumzila ongaphansi komhlaba waseNew York City
Ukwelashwa Okusha Komtholampilo Kwe-Multiple Sclerosis
Isitolo samahhala sase-Hainan sithengisa ngo-33% kulo nyaka
UBillionaire Wezokuvakasha Ucela I-Thailand Ukuthi I-Scrap Pass...
E-Canada: Azisekho izivivinyo zangaphambi kokungena ze-COVID-19…
IHolland America Line ilungiselela umcimbi wokuqanjwa kukaMeyi...
Umkhankaso omusha wesikhangiso uthi uJesu naye wazizwa ekhathazekile